ခ င်ပွန်းဖြစ်သူက သူတစ်ပါးရဲ့လူ့အခွင့်အရေး မချိုးဖောက်ရဘူးလို့ ဆုံးမတာကိုခံရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Snap
ပရိတ်သတ်တွေတဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးပိုင်ဖြိုးသုဟာဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်ရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို တစ်ခဲနက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစပြီး ဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်သရု ပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာဆိုရင်လည်း သူမကဓါရိုက်တာဏကြီးနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး အေးချမ်းသာယာလှပတဲ့ကို.်ပိုင်ဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာစိတ်တူကိုယ်တူရှိကြပြီး အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံက သံရုံးတွေရှေ့သွားပြီး သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖော်ထုတ်ကာ တောင်းဆိုသလို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ကူညီအးပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း ပိုင်ဖြိုးသုက ခင်ပွန်းဖြစ်သူဏကြီးဆီကနေ ဆုံးမစကားကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုအခုလိုပဲ ပြန်လည်ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်…။
ပိုဖြိုးသုက ” ဦးဏကြီးကဆုံးမတယ်…ကိုယ်က လူ့အခွင့်အရေးအတွက် democracyအတွက်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်…ကိုယ်ကစပြီးသူတစ်ပါးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုမချိုးဖောက်ရဘူး…သူများကိုမဆဲရဘူး personal attackမလုပ်ရဘူးတဲ့….ဘာကြည့်နေကြတာလဲ? ယူတို့ကိုအိုင်ကတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူး…အိုင့်အစားတစ်ယောက်စာပိုဆဲပေးကြ!!! ပို attackလုပ်ပေးကြလို့အကူညီတောင်းနေတာ…တစ်ယောက်စာပိုပိုသာသာလေးနော်..အားကိုးမယ်နော်..ညီစေနော်! ” လို့ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်….။